Isibonisi sokudumisa amacala | XTL
Fire assay ecubungula
I-Silicon Carbide Elenyukayo
I-Alumina Ceramic ecace
I-Alumina ceramic tube / ipayipi / induku / roller
I-Alumina ceramic substrate / Plate
I-Alumina Ceramic Plunger
I-Alumina Ceramic Disc
Ingxenye ye-Alumina Ceramic
I-Silicon Carbide Ceramic
I-Silicon Carbide Seal Sing Ring
I-Silicon Carbide Turamic Tube / ipayipi / induku / ibha
I-Silicon Carbide Sour
Ipuleti le-alimacon carbiider cerandi
Bn ceramic ingxenye
Ingxenye ye-PBN Ceramic
Isibungu se-ceramic se-ceramic
Ikhaya > Ama-
Isibonisi sokudumisa amacala
Ukusebenza okuhle kakhulu, .Kuqalo okuhle .Without ngaphakathi kwangaphakathi .Ama-Brittle Edgeges.Cupels:
Ikhasimende elivela eThailand libe lisebenzisana iminyaka emi-3. Ngemuva kweziningi .Tests, ikhasimende lithembela ikhwalithi yobumba lwethu olubaleka.Ikhasimende .Asizo .Asizo ukwethula amanye amakhasimende. Ngiyabonga ngethemba.
Amakhasimende ase-Afrika athenge .Non-Standard Crucibles. Sishintshe amafomula. Izikhathi eziningi futhi zinikezwe izivivinyo zamahhala. Ikhasimende .Also lasiza ekuphenduleni kabusha. I-Final .Formaula yadlula isivivinyo kanye .Ikhasimende laba yikhasimende lethu.
Kusungulwe ngonyaka ka-2009 njenge-proferhipship yedwa, silingisa i-xing tai eside ekhethekile ye-ceramic co., I-LTD ibandakanyeke ekwakheni& Ukuhlinzeka ngeqoqo eliphelele lokukhiqiza umlilo assucible, Cuplel, umkhiqizo ophakeme we-alumina ceramic, umkhiqizo we-alumic carbiic ceramic, umkhiqizo we-ceramic we-trafic .. Zonke lezi zitholakala kumamodeli ahlukahlukene kumakhasimende aphela. Sisebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme zokwakhiwa kwinqubo yokukhiqiza ukuze siqinisekise ukuthi uhla lokugcina luhambisana namazinga embonini. Yonke imikhiqizo ifakwa ekuhlolweni kwekhwalithi eqinile ngesampula yesampula kumapharamitha achazwe kahle ngaphambi kokuthi kuhanjiswa kumakhasimende ukuphela.
Izwe / Isifunda
Inani lokukhipha lonyaka